PDF NA FB2 FILE CONVERTERS ONLINE - ỌRỤ NTANETỊ - 2019
Ndị na-egwu egwu na-enwe mmasị na mmemme ndị e mere maka ịkụ egwu egwu. Otu n'ime usoro ihe omume ahụ bụ AIMP ọkpọọ egwu, mepụtara na afọ 2000 ma melite na mbipụta ọhụrụ ọ bụla.
Usoro kachasị ọhụrụ nke usoro ihe omume ahụ nwere atụmatụ dị mma na nke oge a, nke e mere na mmụọ nke Windows 10, nwere ọtụtụ ọrụ maka ọrụ na faịlụ mgbasa ozi. Ọkpụkpọ a dị mma maka idozi ndabara maka ịkpọ egwu egwu, ebe ọ bụ na ekesa ya n'efu n'enweghị ụgwọ ma nwee ndepụta asụsụ Russian. Naanị ị ga-ebudata, wụnye ma nwee mmasị n'ịgụ egwú ị kachasị amasị gị!
Kedu ihe atụmatụ AIMP na-enye ndị ọrụ ya?
Hụkwa: Mmemme maka ịge egwu na kọmputa
Dekọọ ọbá akwụkwọ
Onye ọ bụla ọkpụkpọ nwere ike igwu egwu faịlụ, mana AIMP na-enye gị ohere ịmepụta nkọwa zuru ezu nke egwu a na-akpọ. Site na ọtụtụ faịlụ, onye ọrụ nwere ike ịmepụta ma iyo nchọnchọ ndị a dị iche iche site na iche iche dị iche iche: omenka, ụdị, album, onye na-edekọ, ma ọ bụ nhazi ọrụ nke faịlụ ahụ, dị ka usoro na ugboro.
AIMP nwere ọtụtụ nhọrọ maka ịmepụta listi ọkpụkpọ ederede. Onye ọrụ nwere ike ịmepụta listi ọkpụkpọ egwu na-akparaghị ókè nke a ga-anakọta na njikwa listi ọpụrụiche pụrụ iche. N'ime ya, ịnwere ike ịtọ ọnọdụ na oge ntanetịime, tinye ntọala onye ọ bụla.
Ọbụna n'emeghere njikwa listi ọkpụkpọ, ị nwere ike ịgbakwunye faịlụ na folda ọ bụla na ndepụta. Onye ọkpụkpọ ahụ kwadoro ọrụ na listi ọkpụkpọ dị iche iche n'otu oge, na-enyere ha aka na mbubata. A pụrụ ịmepụta listi egwu na-adabere n'ọbá akwụkwọ. Ha onwe ha egwu egwu nwere ike na-aga n'usoro ma ọ bụ mechie otu n'ime ha.
Ụzọ kachasị mfe ịchọta faịlụ achọrọ na listi ọkpụkpọ bụ iji ogwe ọchụchọ na AIMP. Nanị tinye mkpụrụ akwụkwọ ole na ole site na faịlụ faịlụ ahụ, a ga-arụ ọrụ ahụ. Onye ọrụ ahụ dịkwa na ọchụchọ dị elu.
Usoro ihe omume ahụ na-enye ọrụ iji chọọ faịlụ ọhụrụ na folda ahụ nke agbakwunyere egwu egwu egwu.
Njikwa Ọkụ Egwú
AIMP enweela njirimara atụmatụ njikwa. Na ụda mmetụta ụda, ị nwere ike ịhazigharị nkwughachi, ntụgharị, bass na akụkụ ndị ọzọ, gụnyere ọsọ na oge nke azụ. Maka ihe na-atọ ụtọ nke onye ọkpụkpọ ahụ, ọ gaghị abụ nnukwu ihe iji rụọ ọrụ ngbanwe na attenuation dị mma nke ụda ahụ.
Ejelita na-enye onye ọrụ ohere ịhazi ụda ugboro, wee họrọ template chepụtara maka ụdị dị iche iche nke egwu - oge gboo, nkume, jazz, ewu ewu, ụlọ ọrụ na ndị ọzọ. Onye ọkpụkpọ ahụ nwere ọrụ nke normalizing olu na-ekwe omume ịgwakọta n'akụkụ egwu.
AIMP nwere ike igosi mmetụta dị iche iche na-ahụ anya mgbe ị na-egwu egwu. Nke a nwere ike ịbụ ihe ntanetịime ọhụụ ma ọ bụ ihe oyiyi na-ese onyinyo.
Ọrụ redio Internet
Site na enyemaka nke AIMP, ị nwere ike ịchọta redio ma jikọọ ha. Ka ị na-abanye na redio ụfọdụ, naanị ịkwesịrị itinye njikọ sitere na Ịntanetị gaa na iyi ya. Onye ọrụ nwere ike ịmepụta ndekọ nke ụlọ ọrụ redio ha. Ị nwere ike idekọ abụ ọma ahụ nke na-ada n'elu ikuku na diski ike gị.
Nke a bụ akụkụ omume nke ihe ọkpụkpọ, nke ọ nwere ike ịtọ omume ndị na-anaghị achọ ka ndị ọrụ na-ekere òkè. Dịka ọmụmaatụ, inye ọrụ iji kwụsị ọrụ n'otu oge, gbanyụọ kọmputa ma ọ bụ rụọ ọrụ dị ka mkpu na oge a kara aka, na-egwu otu faịlụ. N'ebe a, enwere ohere iji dozie attenuation nke egwu n'oge oge a kara aka.
AIMP na-enye gị ohere ịnyefe faịlụ site n'otu usoro gaa na ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, onye na-agbanwe ihe ọdịyo na-enye ọrụ nchịkọta faịlụ, na-edozi ugboro, ọwa na ihe atụ. Enwere ike ịchekwa faịlụ nwere ike ịgbanwe site na aha dị iche iche ma họrọ ebe na diski ike maka ha.
Ya mere, nyochaa nke AIMP onye ọkpụkpọ ọkpụkpụ akwụsịla, ka anyị chịkọta.
- Ihe omume a nwere ndepụta asụsụ Russian
- Egwuregwu na-ekesa n'efu
- Ngwa a nwere interface nke oge a na unobtrusive
- Ụlọ egwu music na-enye gị ohere ịmepụta egwu
- Na-edezi data gbasara faịlụ egwu
- Nhazi nhazi na arụ ọrụ
- Onye na-edozi ngwa ngwa
- Na-ege ntị na redio online
- Hazie ọrụ ntọghata
- E gosipụtara mmepụta anya anya n'ụzọ doro anya.
- Ihe omume a adịghị adaba n'ụzọ dị mfe iji tray
Download AIMP n'efu
AIMP maka gam akporo Gee na redio na AIMP ọkpọ egwu egwu RealTimes (RealPlayer) Foobar2000
AIMP bụ onye ọkpụkpọ na-ewu ewu nke faịlụ faịlụ na otu ihe eji arụ ọrụ na ya. E nwere ngwá ọrụ maka ịgbanakọta ọdịyo, e nwere ngwá ọrụ maka modifying ID3v mkpado.
Onye Mmepụta: Artem Izmaylov